Furriinka oo keena wadna xanuun - BBC News Somali
Furitaanka ayaa u badan in uu keeno wadna xannuun marka la barbardhigo dadka uu guurkooda guuleystay, waxaa sidaa lagu sheegay cilmi baaris laga sameeyay dalka Maraykanka.
Wareysiyo lala yeeshay 15,827 qof ayaa muujinaya in haweenka dhibaato aad u daran ay soo gaarto marka ay kala tagaan saygooda, waxa ayna khatartaasi yaraaneysaa marka haweenka dib loo guursado.
Cilmi baaristan oo lagu soo daabacay wargayska journal Circulation, oo ka soo baxa dalka Maraykanka, ayaa ku baaqay in walwal aad u daran uu la xiriiro marka uu furitaan dhaco, waxa uuna keenaa saameyn wakhti badan qaadata oo ku raagta jirka qofka.
Hay’adda British Heart Foundation ayaa ku baaqday in la sameeyo cilmi baaris badan kahor inta furriinka loo aqoonsan inuu keeno dhibaato dhanka wadnaha ah.
Waxa ay hay’adda intaa ku dartay in haddii uu dhinto qof aad kuugu dhow ay dhici karto in qofka uu aad khatar ugu jiro wadna xannuun.
Hadda koox ka socota jaamacada Duke University ayaa sidoo kale sheegtay in dhibaato dhanka wadnaha ah ay dhici karto furriinka kaddib.
Xilligii la sameeyay cilmi baaristan,oo u dhaxaysay 1992 iyo 2010, qiyaastii hal qof oo ka mid ah seddex qof oo baaritaan lagu sameeyay ayaa ugu yaraan la furay hal jeer.
Haweenka la furay hal jeer ayaa tiradooda ay tahay boqolkiiba labaatan iyo afar, waxaana suura gal ah in ay qabaan wadna xanuun, sida lagu sheegay cilmi barista haddii loo barbardhigo kuwa guurkooda uu guuleysto.
Tirada ayaa ahayd boqolkiiba todobaatan iyo todobo kuwa labada jeer la furay.
Marka raga la fiiriyo waa ay ka duwan yihiin tan haweenka oo 10% ayaa khatar wajaha marka ay furitaan sameeyaan, balse waxa ay tiradaasi kordheeysaa marka laba jeer ay ragga furiin sameeyaan, oo waxa ay gaaraysaa boqolkiiba sodon.
Prof Linda George, oo ka mid ah dadka cilmi baaristan sameeyay ayaa sheegay " khatartan waxaa loo barbardhigi karaa tan dhiig karka ama haddii qofka uu qabo sokoroow, marka halkaas ayuu gaarsiisan yahay, waana mid baaxaddiisu ay ballaaran tahay.